Shariif oo ka hadlay qaraxii Muqdisho
8 Apr 8, 2012 - 7:00:19 AM
Madaxweynaha Somalia Sh. Shariif Sh. Axmed ayaa sheegay in mas'uuliyad daro dhinaca amaanka ah uu ku dhacay Qaraxii ka dhacay Tiyaatarka Muqdisho, isagoo eedda dusha ka saaray Wasaarada Warfaafinta.
Madaxweynuhu wuxuu intaas ku daray in Hay'adaha Amaanka iyo Madaxda DF aan lagu soo wargelin xaflada, sidoo kalena si aan taxadar ahayn loo bixiyay Warqadihii Casuumada, taasna ay keentay in Al-Shabaab ay ka faa'iideystaan oo qorshahooda fuliyaan.
Qaraxii Tiyaatarka ayaa ahaa mid la doonayay in lagu dilo Ra'iisul wasaaraha Somalia balse wuu ka badbaaday, waxaase ku dhintay xubno Isboorti iyo dad kale oo goobta ku sugnaa, iyadoo sidoo kale ay ku dhaawacmeen xildhibaano iyo wasiiro DF ka tirsan.
"Waxay ila tahay Qaraxaas wuxuu ku yimid dayacaad ka timid dhinaca Wasaarada Wafaafinta iyo howsha oo aan sidii la rabay loo abaabulin" ayuu yiri Sh., Shariif oo intaas ku daray in baarista lagu ogaan doono sababta.
Madaxweynuhu wuxuu sheegay in Hay'adaha Amaanka aan lagu wargelin halka ay ka dhacayso xaflada. Sidoo kale wuxuu sheegay in iyagu ay weydiiyeen wasiirka in ajandaha xaflada uu soo gudbiyo si loo arko balse aysan taasi suurogal noqon.
"Markan oo kale waxaa la doonayaa in nafta dadka la casuumayo la badbaadiyo, ma ahan in xaflad la iska qabto iyadoo aan hay'adaha amaanka lagu wargelin, waayo tani waxay isoo xusuusisay Qaraxii ka dhacay Shaamo ee ay ku dhinteen wasiirada" ayuu yiri Sh. Shariif.
Gabgabadii ayuu Madaxweynuhu sheegay in Wasaarad walba oo dowlada ka tirsan lagula xisaabtami doono xafladaha ay qabanayso waxa ka dhaca hadii aysan ku wargelin hay'adaha amaanka xafladaas.